Anjara, lahatra, tendry, vintana: Siansa sa finoana? – fanilo
Isana��ny mampiady hevitra ny maro ny fandraisana��ny fiarahamonina malagasy ny zavatra efa-doha dia ny atao hoe Anjara, Lahatra, Tendry ary Vintana. Ny anjara sy lahatra ary tendry dia saika naravina��ny frantsay amina��ny teny tokana hoe a�?Destina�? izay adika amina��ny teny anglisy hoe a�?Destinya�?. Ny teny hoe a�?vintanaa�? moa, raha ny fikarohana nataona��ireo mpahaiolona miompana amina��ny fivavahana sy ireo mpanandro, dia misy hifandraisany amina��ny teny soailii na ireo mpiavy teto amintsika niaraka tamina��ny malaizianina sy indonezianina hoe a�?bintanga�?, izay midika hoe a�?kintanaa�?. Ity farany aloha izany no hita taratra ho mazava kokoa fa misy hifandraisany amina��ny tontolona��ny kintana eny amina��ny lanitra eny izay mahazo ny ety ambonina��ny tany ety. Ny fanandroana na ilay antsoina amina��ny teny frantsay hoe a�?Astrologiea�?, izany hoe siansa mombana��ny kintana no tena taranja handinihana��ny siantifika azy io. Arakaraka ny daty sy ny taona nahaterahana��ny olona iray, hoy ireo siantifika, no kintana mifanandrify aminy ka antony tsy mampety na mampety ny ataona��ny olona iray ny vintana miara-dalana aminy isana��andro.A�A� A�
Kolontsaina tsy mitovy
Hiverenana kosa ary ireo fiheverana 3 nambara tetsy aloha dia ny mikasika ny anjara sy ny lahatra ary ny tendry. Araka izany dia tsy mitovy amina��ny kolontsaina tandrefana mihitsy ny kolontsaina tantsinanana mikasika ireo resaka mifandraika amina��ny tontolo tsy hita maso nefa dia ninoana��ny ntaolo fa misy hifandraisany amina��ny zava-mahazo ny olombelona ireo. Hery napetraky ny mpahary handrindra ny fiainana��ny ety ambany masoandro ireo 4 voalaza teo aloha, raha ny angona vita hatramina��izay. Misy ny famaritana milaza fa Ampahany soa na ratsy voatokana ho an'ny tsirairay avy amin'izay iombonana amin'ny hafa na avy amin'Andriamanitra na Olombelona no atao hoe anjara. Ny vintana kosa dia kisendrasendra, hery misy hifandraisana amin'ny kintana ary fizotry ny fiainana araka ny tonon'andro nahaterahana. Na ny anjara na ny vintana dia samy azo amboarina sy hananana��ny olombelona fahefana avokoa ary misy ny fomba fikajiana manokana voatokana ho amina��izany, raha ny fanazavana��ireo mpahay azy. Lamina avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fizotry ny fiainan'ny olona ary efa voasoratra kosa no atao hoe lahatra. Izany hoe, tsy afa-midify izany ny olombelona. Tsy hananana��olombelona fahefana, toy izany koa, ny tendry satria endrika manokana andraisan'ny tsirairay avy izay tandrify azy amin'ny vahana misy azy.
Misy avy amina��Andriamanitra fa misy avy amina��olombelona
A�Na dia tsy hananana��izay mandray azy fahefana aza ny tendry dia mety noraisiny tamina olombelona ihany koa fa tsy voatery avy amina��Andriamanitra hatrany, toy ny hoe ny filoham-pirenena, ohatra, no nanendry ny praiminisitra. Toy izany koa ny anjara saingy ny lahatra sy ny ventana kosa anefa dia avy amina��Andriamanitra mandrakariva. Ny ifandraisana��izy efatra kosa anefa dia samy tsy misy azoo vaina na soloina na isafidianana avokoa.
Isana��ny mampiady hevitra ny maro ny fandraisana��ny fiarahamonina malagasy ny zavatra efa-doha dia ny atao hoe Anjara, Lahatra, Tendry ary Vintana. Ny anjara sy lahatra ary tendry dia saika naravina��ny frantsay amina��ny teny tokana hoe a�?Destina�? izay adika amina��ny teny anglisy hoe a�?Destinya�?. Ny teny hoe a�?vintanaa�? moa, raha ny fikarohana nataona��ireo mpahaiolona miompana amina��ny […]